Barruun 'Gullallee post' akka hin gurguramne dhorkamee? - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Feesbuukii 'Gullallee Post'
Dhaabbata maxxansaa fi beeksisaa Gadaa Gullallee jedhamuun kan qophaa'u barruun 'Gullallee Post' ji'a ja'a dura qabiyyee Afaan Oromootiin maxxansuu eegaluun yeroo ammaa maxxansa isaa jildii 10ffaarraan ga'eera.
Barruun kun yeroo ammaa magaalota Oromiyaa hedduu keessatti akka hin bitamnee fi hin dubbifamne dhowwamuu akkasumas ammoo namoonni barruu kana raabsan hidhamaa fi doorsifamaa jira jedhu qopheessitoonni barruu kanaa.
Gulaalaa Olaanaan barruu 'Gullallee Post' Obbo Lalisaa Indiriis, Godina Harargeefi magaalota akka Galaan, Naqamtee fi Iluu Abbaa Booraa keessatti barruun kun akka hin gurguramne dhorkameera jedhan.
Sababii gurguruun dhorkameef ammaaf hojii dhaabanii jiraachuu kan dubbatan Obbo Lalisaan, Abbaan Taayitaa Biroodkastii Itoophiyaa akka fala nuuf kaa'uuf iyyanneerra jedhu.
Rakkoon kan isaan mudate Abbaa Taayitaa Biroodkastiirraa akka hin taane kan himan Obbo Lalisaan abbaan taayitaa kun erga eyyama nuuf kennee beekamtii isaatiin hojjechaa jirra jedhan.
Aboon Abbaa Taayitaa Biroodkaastiingii Itoophiyaa hagami?
'OMN fedhii saba Oromoo dura aansee hojjechuu itti fufa'
Hojjettoonni keenya garuu utuma iyyama kana qabatanii jiranii hojii dhorkamaa jiru jedhan.
''Dhimma kanarratti qaama nageenyaa yoo gaafannus ajaja gubbaarraa nutti kennameedha nuun jedhan. Mootummaa giddu galeessaarraa haasofsiifuuf yoo gaafannummoo namni nu dubbisuuf fedhii qabu hin jiru. Abbaa taayitaa biroodkastiirraammoo iyyama qabna. Gidduutti rakkannee jirra,'' jedhu.
Obbo Lalisaan kana haa jedhaniyyuu malee hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa ammoo qaamni rakkoo kanatu na mudatee jedhee nu gaafate hin jiru jedhan.
Rakkoon akkanaa kan nu mudachuu jalqabe maxxansa keenya isa sadaffaarra wayita geenyurraa kaaseeti kan jedhan Obbo Lalisaan ergasii hojjettoota keenyaa fi namoota barruu kana raabsan doorsisuu fi hidhuun addaan citee hin beeku jedhan.
Obbo Geetaachoon garuu mirga walabummaa pireesii eeguun ejjennoo mootummaa ta'uu eeranii gaazexeessaan karaa seera qabeessa ta'een hojiisaa hojjetu dhiibamaa akka hin jirre dubbatan.
Isa gaazexeessitoonni OMN fi ONN waltajjiiwwan mootummaa akka hin gabaasne dhorkamuu fi hidhaa fi doorsisi irraa ga'aa jiraachuu irratti gaafataman wayita deebisan,''Gaazexeessaan kan TV'f hojjetus ta'e kan gaazexaarratti barreessu mirga walaba ta'ee hojjechuu qaba. Yoo mirgisaa sarbame ammoo himachuu danda'a.'' jedhan qondaalli mootummaa kun.
Hayyama Abbaa Taayitaa Birooodkastiirraa argatanii fi sanada gibira mootummaa ittiin kaffalan namoonni barruu kana raabsan qabatanii deemanillee qaamoleen nageenyaa fi caasaaleen mootummaa godinaalee isaan doorsisuu akka hin dhiisne dubbatan Obbo Lalisaan.
''Calanqootti hojjettoonni keenya ja'a guyyaa afur hidhamanii gadi lakkifaman. Hawwii Guddinaattis akkasuma. Iluu Abbaa Booraattimmoo nama barruu keenya raabsaa ture hanga yoonaatti eessatti akkasaan hidhanii jiran baruu hin dandeenye. Naqamteettillee akkasuma intalli raabsitu tokko achi buuteenshee dhabameera.'' jedhu Obbo Lalisaan.
TV walitti bu’insi naannolee Somaaleefi Oromiyaa hundaa’uuf sababa ta’eef
Barruun 'Gullallee Post' akka hin raabsamne wayita dhorkamu qaamoleen dhorkan kan akka sababaatti kaasan maali jennee isa gaafanneef Obbo Lalisaan wayita deebii kennan,''Gullallee post sagalee ABO'ti, sagalee KFOti, farra mootummaati nuun jedhu'' jedhan.
Yeroo ammaa iyyannaasaanii Abbaa Taayitaa Biroodkastiitti galfatanii deebii eegaa jiraachuu fi yeroof hojii dhaabanii akka jiranis dubbatan.
Barruun Afaan Oromoo 'Gullallee Post' jedhamu kun torban lamatti yeroo tokko ba'a.
Girmaa Guutamaa: 'OMN fedhii saba Oromoo dura aansee hojjechuu itti fufa'
2 Amajjii 2020
'Hokkara Hararii warri qindeessan leellistoota sirna duriiti,' Hogganaa Bulchiinsaafi Nageenyaa naannoo Haraarii
Nabaad: TV walitti bu’insi naannolee Somaaleefi Oromiyaa akka hundaa’uuf sababa ta’eef
Walabummaa Miidiyaa: Aboon Abbaa Taayitaa Biroodkaastiingii Itoophiyaa hagami?